कन्चन दिदी कसले सिकायो यस्तो झुटो बोल्न ? | KTM Khabar
कन्चन दिदी कसले सिकायो यस्तो झुटो बोल्न ?
२०७३ मंसिर ६ गते १६:२६ मा प्रकाशित
म त्यो बाटो धेरैपटक हिडेकी थिए । तर ती महिलालाई पहिलो पटक त्यस्तो अवस्थामा देखेकी थिए । नजदिकमा पुग्दा दिदीको शरिरबाट पिसाबको गन्ध र मुखबाट रक्सिको वासना आएको थियो । लाग्यो खल्तिमा भएको पैसा निकालेर दिउँ, होइन, पैसा दियो भने दिदीले रक्सि खालिन् । होइन, बिहानी पानी परेको चिसो–चिसो छ चिया नै खुवाउँछु । त्यहि आमैको पसलमा पुगेर एक कप चिया मागे । अनि पकौडा पनि मागे । ती दिदीलाई भित्रै राखेर चिया खुवाउँछु भनेर भित्र लगेकी थिए । तर, ती आमै र त्यहाँ वरपरका स्थानीयहरु ती दिदीको व्वयहारले आजित भएका रहेछन् । आमैले भनिन् “मैया यसलाई नल्याउनुस यता, जहाँ खायो त्यहि पिसाब गरेर हिड्छ यसले । म त बस्न दिन्न भित्र ।” सोचे मनमा फोहोर र बाहिर सफा खोज्ने समाज यस्तै हो । यहाँ दुःखी र गरिवले कस्को घरमा बास पाउछ । अनि ती दिदीलाई बन्द रहेको सटरको पेटीमा राखे । दिदीले चिया र पकौडा खाइन् ।
तीनवर्ष ओम नर्सिङ कलेज चावहिलमा पढेको ९२०५३/०५४ /०५५० ओम अस्पतालमा साढे चारवर्ष काम गरेको जनरल वार्डमा नर्सका रुपमा ।
जेठी दिदी निर्मला पोखरेल फोन नं ४७७०४१७०
आमा विराटनगर बयरगाँछी । आउ बस त भन्नु हुन्छ । तर, भाइ बुहारी छन घरमा त्यस्तै त होनी, जान्न ।
काम कसैले दिएनन्, मोडेल अस्पतालमा डा। भरत प्रधानसँग जब चाहिएको छ भने, उहाँले जुम्ला जाउँ भन्नु भयो । तर, म गइन् ।
होइन जान्छु । मेरो घरको नम्बर यो हो फोन गर्नुस् है । कन्चनले फोन नं अनि श्रीमानको नाम आफै टिपिदिइन् ।
अनि कान्छी औला ठड्याउँदै पिसाब लागेको भनेर हिड्न थालिन्, आइ हाल्छु भन्दै । म सँगसँगै गए । दिदीलाई चुरोट खान मन लागेको रहेछ । उनले चुरोट माग्न पसलमा पुगिन् । तर, ती पसलकी दिदीले “ उता जा, आइज त मात्रै ।” मैले बुझी हाले, अनि आफै खुकुरी चुरोट किनिदिए । सल्काउन लाइटर मागे । अनि दिक्षाकोमा जाँदा केटाकेटीलाई दिनु भनेर झण्डै ७०–८० रुपैयाँको चक्लेट पनि किनिदिएर हातमा राखिदिए । दिदीले चुरोट तान्न थालिन् मैले फोटो खिचे ।
लेखेर कथा पछि लेख्ुछ भनेर स्टाटस राखेकी थिए । त्यो दिन साउन ८ गते ९ २१ जुलाई २०१६० रहेछ । कन्चन दिदी दिक्षाकोमा पुगेको सायद १५–२० दिन पुगेको थियो की, दिदी त्यहाँबाट हिडिन् भनेर दिक्षाले फोन गरिन् । “दिदी कतै देख्नु भएको थियो की कन्चन दिदीलाई, मैले उनको श्रीमानसँग कुरा गरेकी छु त्यो दिदीलाई कहाँ भेट्ने होला ?” मैले खोइ दिक्षा देखिन् नी भनेकी थिए । पछि दिक्षाले “कन्चन दिदीले बहिनी म यहाँ छु भनेर फोन गरेपछि लिएर आए भनेर तस्बिर फेसबुकमा राखेकी थिईन् ।
एउटा राम्रो कुरा कन्चन दिदीमा अहिले देखिएको परिवर्तन शरीर सफा र राम्रा कपडा देखे । कुरा पनि त्यहि छन्, जुन मलाई पनि भनेकी थिइन् । तर, त्यो मनमा कसरी (फोहोरको डंगुर)बाट उठाएको बनावटी झुट कुरा आए भनेर म आफै अन्योलमा छु । “दिदी कसले सिकायो यस्तो झुटो बोल्न, वा फेरि फोहोरमा लगेर फोटो खिचियो कसैबाट ? ”
समाजसेवी दिक्षाहरुका प्रयत्न र अभ्यास कति पवित्र र निष्ठावान होलान वा कति प्रचारमुखी होलान् ती आफ्नै ठाउँमा छ । राज्यले सडकमा पुगेका बेशाहारा, अशक्त, मानसिक असन्तुलन भएकाहरु, बालक, बयस्क र वृद्धबृद्धाहरुको उचित संरक्षण र जिम्मेवारी नलिएसम्म यस्तै घटनाहरु आइरहन्छन्, कन्चनका कथाहरु दोहोरिरहन्छन् । स्रोत : संसारन्युज